1. 'Bitcoin', ego dijitalụ nke ụwa ọhụrụ Kedu ụdị ego ga-enweta uru kasịnụ! Ọ bụrụ na ọtụtụ iri afọ gara aga Otu onye gwara gị na a ga-enwe ego na-anọghị na ụlọ ọrụ gọọmentị ọ bụla. Ma ga-ewu ewu na ojiji niile Kedu nke nwere ụgwọ ịkwụ ụgwọ dị ala karịa nke ịkwụ ụgwọ ụlọ akụ Would ga-achị ọchị ma ekweghị. Mana taa egosiputara na ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla. Ọ dịkwa ịtụnanya na-akwụghachi ụgwọ n'ụdị ego a maara dị ka 'Bitcoin'. Bitcoin Gịnị bụ Bitcoin? Bitcoin bụ ego dijitalụ. E ji kọmputa rụọ ya. Kedu nke bụ ego anaghị ahụ anya Enweghị ọdịdị anyị ga-ahụ dị ka ego ma ọ bụ mkpụrụ ego. Ọ bụ usoro na-abụghị nke etiti. Onweghi onye nwe ya. Ma enwere ike iji ya kama iji ego zụọ ntanetị na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọgbọ. Ma kpọọ ego a "Cryptocurrency"
2. Inwe ego, aghaghi inwe obere akpa, ya bu ego Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ego, ị ga-achọta obere akpa ego, nke ga-enwe ọrụ yiri akaụntụ akụ. Anyị na-echekwa bitcoins tupu anyị emefu ha. Enwere ọtụtụ nyiwe dị iche iche nke obere akpa - obere akpa Coinbase bụ obere akpa dị mfe iji na ihuenyo nke ama. Ọ ga-akwado ma iOS na Androind na ụlọ akụ akaụntụ nkịtị. Na mgbakwunye, ọrụ mgbanwe Bitcoin na-abịa na ezigbo ego ma na-enye mkpuchi maka ego - Mycelium bụ ngwa akpa ego kachasị ewu ewu na smartphones. Ọ nwere ike ịkwado teknụzụ ọhụrụ dịka Trezor, Tor na Bitcoin nchekwa akụrụngwa. - Electrum Nke a obere akpa bụ mmemme eji kọmputa. Abịa na ihe ndị magburu onwe nche izo ya ezo usoro. Iji mee ka ọtụtụ bitcoins dị mma
3. Otu esi enweta Bitcoin
4. Waya n'efu maka ndị mbido Ọ bụghị ọtụtụ uba, nwee ike ịnweta bitcoin n'efu na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi. Kedu nke a ga-enyocha nke ọma N'ihi na ọtụtụ n'ime ha ga-aghọgbu ibe ha Weebụ weebụ a na-ekesa n'ezie dị ka https://freebitco.in Kedu nke nwere ike ịbanye ma tinye ma nweta adreesị bitcoin anyị na weebụsaịtị ọ bụla na Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro ma ọ bụ Huobi.co.th iji jupụta ma debe bitcoin mgbe niile kwa awa, na-eru ego kacha nta. mgbe ole Nwere ike ịnyefe obere akpa anyị
5. Ahịa ahia, ebe anyị ga-azụta bitcoin na baht, anyị na-eme ya na Thailand, weebụsaịtị ha, Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro ma ọ bụ Huobi.co.th ga-enye anyị ohere itinye akwụkwọ maka nyocha njirimara, nyefee baht n'ime Akaụntụ ma zụta bitcoin site n'aka onye ahịa ka ọ bụrụ nke anyị. Ọ dabere na ịchọrọ ijide ego ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụ ịnwere ike ịzụ Bitcoin ma zụọ ahịa na baht, mana enwerekwa ihe egwu. N'ihi na ahịa crypto na-emeghe oge niile.
6. Ihe pụrụ iche ma na-atọ ụtọ Bitcoin bụ na enwere ike ịgbanye ya dị ka ọla edo na ụdị dijitalụ. N'ihi na emepụtara ya inwe ngụkọta nke nde 21, enweghị ike inwe karịa. Ya mere, anyị ga-eji usoro igwuputa ihe. Bụ igwu na akụrụngwa akụrụngwa Kedu nke a nwere ike ịzụta n'ịntanetị Naanị setịpụ ya, kwunye ya, kwụọ ụgwọ gị wee hapụ ya. Ọ ga na-egwupụta mkpụrụ ego dijitalụ maka anyị.
7. Eachzọ ọ bụla nke itinye ego na Bitcoin dị iche. Nwere ike ghara ikpe ikpe nke ọ kacha mma Mana odi nkpa ka imuta ihe omuma na uzo nke uzo abuo. Iji nyere aka mee nkwekọrịta uru ahụ n'ụzọ dị nwa oge. Nwetara gị nsonaazụ kacha mma